EU oo mushaharaadka siiyey ciidamada Kenya ee ka tirsan Amisom | Baydhabo Online
EU oo mushaharaadka siiyey ciidamada Kenya ee ka tirsan Amisom
Midowga Europe waxay fasaxeen Kharaj dhan 198 million oo Shillinka Kenya ah, taasi oo ah Mushaaraadka Ciiddanka Kenya ee qeybta ka ah Hawlgalka AMISOM ka mqanaa 7-dii bilood ee la soo dhaafay.
Dukumentiga Wasaaradda Maaliyadda Kenya ayaa muujinaya inay Dowladda Kenya heshay Lacagtaasi bishii la soo dhaafay ee September, waana Kharaj Soo-celintii ugu dambeysay ee ay Midowga Europe ka heleen tan iyo bishii Feberaayo ee la soo dhaafay.
Dukumentigaasi wax faahfaahin kama bixinin waxa sababay dib-u-dhaca Kharajkaasi, balse Idaacadda BBC-da ayaa mar sii horreysay sheegtay in Sababo la xiriira Arrimaha Xisaabaadka sababtay in la hakiyo Mushaaraadka la siiyo Ciiddanka AMISOM oo tiradoodu dhan tahay 22,000 oo Askari.
Ku-dhawaad 4,000 oo Askar Kenyan ah ayaa qeyb ka ah Ciiddanka AMISOM, kuwaasi oo ay Beesha Caalamka bixiyaan mushaarkooda.
Askari kasta oo ka tirsan Hawlgalka AMISOM waxa bishii mushaar ahaan u qoran lacag dhan Kun iyo 28 Dollar (1,028 US Dollar), balse waxay Wasaaradaha Difaaca ee Dowladaha ay ka soo jeedaan Ciiddankaasi Askari kasta bishiiba ka jaraan 200 Dollar, taasi oo la sheegay inay tahay Qaaraan wax loogu qabanayo Ciiddamadda dalalkaasi.
Hawlgalka AMISOM oo la asaasay sannadkii 2007-dii waxaa ku mideysan Ciiddamo ka kala socda dalalka Uganda, Jabuuti, Kenya, Burund IYO Ethiopia.